Isaladi yePotato yeDill Pickle - Iiresiphi
Isaladi yePotato yeDill Pickle
Le Dill Pickle Potato Salad imnandi kwaye ilayishwe ngeepickles zedill ezikrunekileyo kwi-zesty dill pickle juice egalelwe isinxibo! Le isaladi yeetapile yenza i-dill pickles inkwenkwezi yesitya esenza icala eliya kuba yi-hit yayo nayiphi na i-bbq yasehlotyeni!
Ukuba uyifundile ibhlog yam, usenokuba uqaphele ukuba ndinayo le nto ye-dill pickles, ndiyithanda ngokwenene. Uya kumangaliswa ukuba zingaphi izitya onokuthi uzongeze kuzo.
IiPickles zeDill yeyona ndlela ifanelekileyo yokunyusa umdlalo wakho wesangweji samasi eyosiweyo (injalo, Dill Pickle Bacon Itshizi egcadiweyo ) kwaye wenze ngokunyanisekileyo EYONA Isaladi yePasta ukhe wabanayo! Bagqibelele eqhotsiweyo crispy okanye isebenze njenge dill pickle dip !
Iitapile ezibomvu zesikhumba zikhethwa ngokugqibeleleyo kwisaladi yezambane zibamba imilo yazo ngelixa zinika i-creamy texture kwaye musa ukucwina kwitoni yamanzi xa zibilisiwe. Ngethuba nje iifatata zakho zinesikhumba esincinci (ezifana neetapile zegolide ze-yukon), akukho mfuneko yokuyikhupha (ukuba awuyithandi izikhumba ngokuqinisekileyo unokuzikhupha).
Emva kokuba iitapile ziphekiwe kwaye zipholile, ndiyathanda ukutyumza ezimbalwa zazo ngenxa ye-creamy texture enkulu. Awufuni ukuba zicudiswe ngokupheleleyo, usafuna ukugcina ukuthungwa kunye nokumila kweetapile ezininzi.
Eyona nto ikhethiweyo ye-anyanisi kule recipe yi-anyanisi emhlophe kunye ulusu olumhlophe , hayi ulusu olutyheli. I-anyanisi emhlophe ekhutshiweyo ithambile kakhulu yongeza inani elifanelekileyo le-zing kule recipe.
Ukongeza ushizi we-cheddar osikiweyo, amaqanda aphekiweyo agayiweyo kunye / okanye i-ham edayiweyo iya kwenza le saladi imnandi ibe sisidlo! Olu lukhetho olufanelekileyo kwisidlo se-potluck kuba kungekhona nje wonke umntu oyithandayo, kungcono ukuba kwenziwe ubuncinane ubuncinane kwiiyure ezingama-3-4 ngaphambi kwexesha (kwaye inokuhlala efrijini ukuya kwiintsuku ezi-3).
Phinda ubuyisele LE RECIPE yeetapile yesaladi
5ukusukaShumi elinantlanuiivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha LokuphekaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha elipheleleyo30 imizuzu Iinkonzo12 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Le Dill Pickle Potato Salad imnandi kwaye ilayishwe ngeepickles zedill ezikrunekileyo kwi-zesty dill pickle juice egalelwe isinxibo! Le isaladi yeetapile yenza i-dill pickles inkwenkwezi yesitya esenza icala eliya kuba yi-hit yayo nayiphi na i-bbq yasehlotyeni!
▢3 lbs iitapile ezibomvu
▢Nye indebe i-dill pickles inqunyulwe / inqunyulwe
▢1 ½ iikomityi i-celery eqoshiwe
▢6 amaqanda abilisiwe , ipholile kwaye inqunyulwe (ukhetho)
▢1¼ indebe imayonnaise
▢3 amacephe itswele elimhlophe eligayiweyo
▢4 amacephe ijusi yepikile
▢Nye icephe iviniga emhlophe
▢1 ½ amacephe I-Dijon Mustard
▢4 amacephe idill entsha , inqunyulwe
Sika iitapile kwaye unqumle zibe ngamaqhekeza alinganayo. Bilisa iitapile kude kube yithenda (malunga nemizuzu eyi-15). Pholisa ngokupheleleyo. Kancinci ucube iitapile ezimbalwa.
Hlanganisa zonke izithako zokugqoka kwisitya esikhulu. Yongeza izithako eziseleyo kwaye udibanise kakuhle.
Ifriji ubuncinane iiyure ezimbini ngaphambi kokukhonza.
Ukukhonza:0.5indebe,Iikhalori:284,Iicarbohydrates:19g,Iprotheyini:5g,Amafutha:Amashumi amabinig,Amafutha aGqithisiweyo:3g,ICholesterol:103mg,Isodium:409mg,Potassium:599mg,Ifayibha:Mbinig,Iswekile:Mbinig,IVithamin A:240IU,Ivithamin C:10.6mg,Ikhalsiyam:37mg,Iayini:1.3mg
Ukukhula Amantombazana Akuqhelekileyo Clothing I-Cruise Port Izinja Nokuhamba Ukuzilolonga Iividiyo Kunye Nomculo
izimbo zeenwele ezinde kubafazi abadala
coconut rum iziselo kunye nejinanse juice
zingaphi iikhabhohdi ezikwiwayini emhlophe
njani ukonwaba ungatshatanga xa bonke abahlobo bakho kubudlelwane
Ungamthuthuzela njani umntu olahlekelwe sisilwanyana sasekhaya
amagama amantombazana aqala ngo-s